कानुनी शासन भएको देश मात्र समृद्ध हुन्छ - Karobar National Economic Daily
कानुनी शासन भएको देश मात्र समृद्ध हुन्छ
query_builderAugust 23, 2017 12:14 PM supervisor_accountकारोबार संवाददाता visibility990
माधव पौडेल अध्यक्ष नेपाल कानुन आयोग । तस्विर: सुनिल प्रधान
करिब तीन दशक निजामती सेवामा बिताएका पूर्वसचिव माधव पौडेल नेपाल कानुन आयोगका अध्यक्ष हुन् । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारको शिक्षा तथा सञ्चार मन्त्रीसमेत बन्ने अवसर पाएका पौडेल अन्तर्राष्ट्रिय तथा बिजनेस कानुनका विज्ञ हुन् ।
उनले जागिरे जीवनमा पाँच वर्ष कानुन सचिव भएर बिताए । सैपु, रामेछापमा जन्मिएका पौडेल ऐन–कानुन बनाउने लामो प्रक्रिया जटिल र झन्झटिलो कार्य भएको बताउँछन् । नेपाल कानुन आयोगले सरकारले बनाउन भनेका विषयमा विभिन्न किसिमका कानुन बनाउँदै आएको छ ।
उनले कानुन सचिव हुँदा कानुन आयोगको पदेन सचिवको हैसियतमा अपराधसंहिता, फौजदारी कार्यविधि संहिता, देवानी कार्यविधि संहितालगायतका ६ वटा विधेयकको मस्यौदामा मुख्य भूमिका निर्वाह गरेका थिए, जुन व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित हुने क्रममा छन् । अपराधसंहिता ६४ वर्षदेखि छलफलमा रहे पनि बल्ल व्यवस्थापिका संसद्मा प्रवेश भएको छ ।
उनले अन्तरिम संविधानदेखि २०७२ को संविधान मस्यौदा गर्दासम्म विज्ञका रूपमा काम गरेका थिए । कानुन बन्ने सामान्य प्रक्रियादेखि संघीयतामा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने किसिमका कस्ता कानुन आवश्यक छन् ? पौडेलसँग कारोबारकर्मी भगवान खनालले गरेको कुराकानीको सार :
साधारणतया संसद् (व्यवस्थापिका) ले कानुन कसरी बनाउँछ ?
कानुन बनाउने एउटा निश्चित प्रक्रिया छ । पहिलो त कानुन शब्दले व्यापक कानुनी लिखतलाई बुझाउँछ । ऐन, नियम, अध्यादेश, कार्यविधि सबै कानुनभित्रै पर्छन् ।
संसद्ले लामो प्रक्रियापछि ऐन बनाउँछ, जसअनुसार पहिला सम्बन्धित जिम्मेवार मन्त्रालयले कानुनको मस्यौदा तयार गर्छ । विभिन्न मन्त्रालयसँग राय, परामर्श गरिन्छ । कानुन मन्त्रालयको आवश्यक राय–सल्लाहपछि क्याबिनेटमा पेस गरिन्छ । क्याबिनेटले पारित गरेपछि पार्लियामेन्टमा पेस गरिन्छ । त्यहाँ सांसदहरू संशोधन प्रस्ताव हाल्छन् । त्यहाँ पनि आफ्नै प्रक्रिया छ ।
त्यहाँका विभिन्न विषयगत समितिमा छलफल गरिन्छ । सांसदका राय–सुझाव समेटेर संसद्मा प्रजातन्त्रिक विधिबमोजिम भोटिङद्वारा विधेयक पारित हुन्छ । यसलाई सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गरेपछि कानुन बनेर लागू हुन्छ ।
कानुन बनाउने भनेको जटिल र लामो प्रक्रिया हो । यसले समय लिन्छ । अर्को जटिलता भनेको कहिलेकाहीं गैरसरकारी विधेयक (प्राइभेट मेम्बर बिल) पनि संसद्मा पेस गर्ने हाम्रो अभ्यासमा छ । सरकार र संसद्भन्दा बाहिरबाट पनि विधेयक प्रस्ताव गर्ने अभ्यास छ ।
त्यस्तो विधेयक पनि आउन सक्छ । सामान्यतया सरकारको मन्त्रीले संसद्मा विधेयक पेस गर्छ । हामीले बाहिर सोचेजस्तो चाँडो कानुन बनाउन सकिँदैन । कानुन बनाउने कार्यलाई जति सरलीकृत गरे पनि निश्चित प्रक्रिया पार गर्नुपर्छ । दुनियाँमा कसैले पनि जटिल कानुन बनाउन चाहँदैन । उत्पत्ति एउटा मन्त्रालयबाट हुन्छ अनि क्याबिनेट, समिति हुँदै व्यवस्थापिकामा जान्छ ।
पार्लियामेन्टमा दुई–तीन पटक विधेयकमाथि छलफल गर्ने संसारभरको प्राक्टिक्स हो । संशोधन प्रस्ताव हालेपछि सम्बन्धित समितिमा छलफलका लागि जाने, दफावार छलफल हुने, संशोधन राख्ने सांसदहरूका राय–सुझाव समावेश गर्ने, हाउसमा ल्याएर पारित गर्ने कार्य लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो । कानुन बनाउने कार्य बजेट बनाएजस्तो होइन । तुरुन्तातुरुन्तै गर्ने हो भने अध्यादेशबाट ल्याउनुपर्छ, तर कानुन त जनप्रतिनिधिले नै बनाउनुपर्छ ।
कानुन बनाउने सन्दर्भमा नेपाल कानुन आयोगको भूमिका चाहिँ के हुन्छ ?
हाम्रो भूमिका अलि फरक छ । हामी एक्सपर्ट बडी हौं । नेपाल कानुन आयोग कानुन सुधार गर्ने एक मात्र आधिकारिक निकाय हो । ‘कमन ल’ अपनाउने मुलुकमा कानुन सुधार गर्ने नियमित प्रक्रिया हुन्छ ।
अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, भारत, पाकिस्तान, न्युजिल्यान्डलगायतका मुलुकले यस्तै ‘कमन ल’ प्राक्टिक्स गरेकाले त्यहाँ कानुनलाई नियमित रूपले सुधार गर्नुपर्छ भनेर एउटा विशिष्टीकृत निकाय राखेका हुन्छन् । त्यो मान्यताले काम गरिन्छ ।
हामी पनि त्यस्तै संस्था हौं । हामी ‘कमल ल’ का अनुयायी हौं । यद्यपि, विगतमा यसको नाम ‘नेपाल कानुन सुधार आयोग’ थियो, अहिले ‘नेपाल कानुन आयोग’ भनिन्छ, जसको काम कानुन सुधार गर्नु हो । यसले नेपाल सरकारलाई यो–यो विषयमा कानुन सुधार गर्न आवश्यक छ भनेर सुझाव दिन्छ । विभिन्न विषयमा कानुन चाहिन्छ भनेर आयोगले सरकारलाई सुझाव दिन्छ ।
दोस्रो काम, नेपाल सरकारले जुन–जुन कानुनको मस्यौदा बनाउन भन्छ तिनको मस्यौदा तयार गर्छौं । यसैगरी आयोगले समयसापेक्ष रूपमा आफ्नै पहलकदमीमा ऐन बनाउँछ । हामी कानुन क्षेत्रमा अनुसन्धानको काम पनि गर्छौ । कानुनका क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूका बारेमा अध्ययन गर्छौं ।
संघीयता कार्यान्वयनका लागि नेपाल कानुन आयोगले कसरी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ?
नेपाल कानुन आयोगले संविधान कार्यान्वयनको सिलसिलामा काम गरिरहेको छ । संघीयता व्यवस्थापनका लागि सरकारले मौलिक हक सम्बन्धमा केही विधेयक बनाउन भनेको थियो । हामीले ती विधेयक बनाएका छौं ।
उदाहरणका लागि केही महिनाअघि मात्र उपभोक्ता हित कार्यान्वयन संरक्षण ऐन तयार गरेका छौं । यसैगरी शिक्षासम्बन्धी, गोपनीयताको हकसम्बन्धी विधेयक, खाद्य अधिकार, प्रतिस्पर्धा र बजार प्रवद्र्धन ऐन मस्यौदा गरेका छौं ।
कारागार सुधार ऐनको विधेयक पनि तयार पारेका छौं । संघीय शिक्षा ऐन बनाउने सम्बन्धमा काम गरेका छौं । जग्गा प्राप्ति, फास्ट ट्र्याक ऐनको पनि अध्ययन गरिरहेका छौं । उता उद्योग मन्त्रालयले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण ऐनको मस्यौदा बनाउन भनेकाले त्यो पनि गरिरहेका छौं ।
पेटेन्ट, टे«डमार्कलगायतका बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण गर्ने गरी ऐन बन्दै छ । सरकारले अनुरोध गरेमा हामी कानुन बनाउन सहयोग गर्छौैं । सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयले कानुन बनाउने हुनाले त्यसमा डुब्लिकेसन नहोस् भनेर सरकारको अनुरोधमा काम गर्छौं । कानुन बनाउने कार्य कहिलेकाहीं कमजोरी हुने विधा पनि हो ।
संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन कति समयसम्म आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?
मैले माथि पनि भनिसकें, कानुन बनाउने काम जटिल प्रक्रिया हो । यसका लागि थुप्रै समय लाग्छ । हालै हामीले अपराधसंहिता पारित ग¥यौं । यो २०१० सालदेखि छलफलमा आएको विषय थियो, जतिबेला कानुन आयोग गठन भएको थियो ।
६४ वर्षपछि अहिले आएर पारित भयो । कानुन हरेक आयाम हेरेर बनाउनुपर्छ । एउटै विषयमा छलफल गरिरहँदा असाध्यै समय लाग्ने हुन्छ भने यो पट्यारलाग्दो, झन्झटिलो कार्य हो । यसैले यति नै बेला कानुन आउँछ भन्न सकिँदैन । यो राजनीतिक प्रक्रिया पनि हो ।
समयमा कानुन नआउँदा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग बनेन, जसका कारण चालू आर्थिक वर्षको बजेट प्रभावित भयो भनेर कतिपय विज्ञले नै विरोध गर्दै आएका छन् । तपाईं के प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ ?
समयमा कानुन नबन्दा कतिपय कार्य प्रभावित बनेको देखिएको छ । स्थानीय तह सञ्चालन गर्ने ऐन पनि समयमा आउन सकेन, तर हाल छलफलमा छ । संविधानले बजेट बाँडफाँड गर्दा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसबमोजिम गर्नुपर्छ भनेको छ । तर, चालू वर्ष त्यसो हुन सकेन । आयोग गठन नभएकाले सरकारले आफ्नै पहलकदमीमा बजेट बाँडफाँड ग¥यो ।
हाल यो विधेयक पनि व्यवस्थापिका संसद्को अर्थ समितिमा छलफलमा छ । त्यो विधेयक हामीबाट होइन, अर्थ मन्त्रालयबाट मस्यौदा भएको हो । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन गर्न संविधानले ऐन चाहिन्छ भनेको छैन । आयोग गठन गरेको भए हुन्थ्यो तर सरकारले बनाएन, भैगो । मौलिक हकका विषयमा पनि कतिपय यस्ता तुरुन्तै चाहिने कानुनहरू छन् ।
स्थानीय तह, प्रदेश र संघका कानुनबीच कसरी सन्तुलन कायम गर्न सकिएला ?
संविधानमा प्रस्टसँग यसबारे उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी अनुसूचीहरूमा पनि उनीहरूको अधिकार प्रस्ट रूपमा उल्लेख छ । कुन अधिकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका वा कुन–कुन साझा अधिकार भन्ने स्पष्ट छ ।
संविधानले कथम्कदाचित एउटा तहले बनाएको ऐन अर्को तहले बनाएको ऐनसँग बाझिए कुनचाहिँ लागू हुने भन्नेमा पनि स्पष्ट गरेको छ । प्रदेश र संघका कानुन बाझिएमा संघको कानुन लागू हुन्छ ।
यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहका कानुन बाझिएमा प्रदेशको र संघ र स्थानीयको कानुन बाझिएमा संघको कानुन लागू हुन्छ । कुन विषयमा ऐन बनाउने भन्ने पनि छ र बाझिएमा के गर्ने भन्ने पनि रहेकाले समस्या छैन । शिक्षा ऐन सबै सरकारले बनाउन पाउँछन् ।
सबै सरकारले उनीहरूको आम्दानी हासिल गर्ने कस्ता कानुन बनाउन सक्छन् ? उनीहरूले संविधानको आ–आफ्नै बुझाइअुनसार कानुन बनाएमा के हुन्छ ?
यसको पनि उपचार छ । संविधानले तीनवटै सरकारलाई कुन–कुन क्षेत्रमा (स्रोत) राजस्व उठाउन पाउने भन्ने स्पष्ट गरिदिएको छ । संविधानअनुसार तीनवटै सरकारको स्रोत भनेको राजस्व नै हो । संविधानले स्पष्टसँग बोलेकोमा बाहेक नयाँ क्षेत्र, स्रोत भेट्टाएमा त्यस्तो कानुन तीनै तहका सरकारले बनाउन सक्छन् । तर, एउटै विषयमा सबैले राजस्व उठाउनु हुँदैन ।
हाल प्रस्तावित अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण ऐनले एउटा विषयको राजस्व कुनै सरकारले संकलन गर्ने र कुनैलाई वितरण गरिने कुरा उल्लेख छ । यति गर्दागर्दैै पनि कुनै समस्या आएमा त्यसको पनि संविधानअनुसार नै हल गरिन्छ ।
कहिलेकाहीं समस्या पनि आउँछ । हामी संक्रमणकालीन अवस्थामा छौं । यसलाई व्यवस्थापन गर्न समय लाग्छ । आखिर जसले उठाए पनि वितरण त त्यहींभित्र हुने हो । यसको पनि संविधानले के गर्ने भन्ने उल्लेख गरेको छ । उदाहरणका लागि जर्मनी पनि संघीय मुलुक हो, त्यहाँ कुनै सरकारले राजस्व उठाउने र कुनै सरकारले त्यो रकम पाउने उल्लेख छ ।
उता संविधानले समानीकरण अनुदान, विशेष अनुदान, ससर्त अनुदान र समपूरक अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । संघले उठाए पनि जाने त त्यहीं हो । फरक पर्दैन । घुमाइफिराइ जाने राज्यभित्रै हो । वित्त आयोगले पनि जनसंख्या, भूगोल, खर्च क्षमता, विकासको आधार आदि सूचकांक नै हेर्ने हो ।
तपाईं ‘बिजनेस ल’ को पनि ज्ञाता हुनुहुन्छ, नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि कस्ता कानुन चाहिएला ?
हामीले धेरै पहिलेदेखि विदेशी लगानी भिœयाउने भन्दै आएका छौं । विदेशी लगानी भएमा आर्थिक विकास चाँडो हुन्छ, पूर्वाधारको विकास चाँडै हुन सक्ने, रोजगारी बढ्ने, राजस्व वृद्धि भई परिणाममा मुलुकको जीडीपी चाँडो विकास हुन्छ भन्ने संसारभरको सर्वोत्तम अभ्यास देखिएको छ । हामीले पनि विदेशी लगानी भिœयाउने सम्बन्धमा तीन–चार दशकदेखि भन्दै आए पनि हुन सकिरहेको छैन ।
विदेशी लगानी खुला गर्छु, उदार हुन्छ भने पनि व्यवहारमा लागू गर्न सकिएको छैन । काममा अब्जेक्सन छ । सरकार परिवर्तन भएपछि नीति–नियम परिवर्तन गर्न खोजिन्छ । काम गर्दाको लामो प्रक्रिया र ब्युरोक्रेसीको ह्यासलले एउटै काममा पनि धेरै स्टेप खडा गरिन्छ । उता स्थिर सरकार छैन । हाइली सोफिस्टिकेटेड टे«ड युनियनको अधिकार स्थापित हुन्छ ।
अलिकति चित्त नबुझ्दा बन्द–हड्तालको सामना गर्नुपर्छ । हाल सुधारको स्थितिमा रहे पनि इनर्जी पनि समस्या रूपमा थियो भने कच्चापदार्थ नेपालमा नहुनु र अदक्ष कामदारका कारण पनि अपेक्षाकृत लगानीकर्ता आएका छैनन् । यहींभित्र पनि लगानीकर्ता खोजिनुपर्छ । लगानीकर्तालाई लगानीमा सुनिश्चित छ भन्ने कानुन चाहिन्छ । उनीहरूको संरक्षण हुने गरी कानुन चाहिन्छ ।
यी कुरा भए भने हाम्रो पालामा आर्थिक समृद्धि सम्भव छ । तर, यसका लागि प्रमुख साधन भनेको ऐन हो । ऐन एकदम प्रभावकारी भेइकल हो । यसैगरी स्थिर सरकार पनि चाहिन्छ । हाम्रा कानुन अति स्थिर छन्, विश्वसनीय छन्, पारदर्शी छ, हतपत्त परिवर्तन हुँदैनन् भन्ने सुनिश्चितता गर्नुपर्छ अनि विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नुपर्छ ।
विकासका काममा कतिपय ऐनमा किन विरोधाभास आउँछ ? जस्तै, जलविद्युत् बनाउँदा वनको अवरोध पटक–पटक आउँछ ।
जलविद्युत्, सडक र ठूला पूर्वाधारका काममा वन रक्षाको कुरा आउँछ । वनको रक्षा वन मन्त्रालयले गर्नु स्वाभाविकै हो । उसले वनक्षेत्र वृद्धि हुनुपर्छ भन्नैप¥यो । समस्या के हो भने सबै मन्त्रालयका कामका आफ्नै क्षेत्र हुन्छन् ।
सबैको राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व हुन्छ । बढी उदार भए असर गर्न सक्छ, तर यसको अर्थ वनले रोक्नुपर्छ भन्ने होइन । पहिलेको अवस्थामा अहिले धेरै सुधार आएको छ, सहज बनाउनुपर्छ भन्ने छ । विकास र पूर्वाधारमा प्राथमिकता दिनुपर्छ । सहज र फेसिलियट गर्नुपर्छ । वातावरणीय प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्छ ।
नेपालको कानुन देवैले जानून् भनेर जनता दुखेसो गर्छन् नि ?
कानुनमा द्विविधा भयो, अस्पष्ट भयो भन्ने हो । एउटै कानुन पनि कसैलाई कुन रूपमा लागू हुन्छ र कसैले कुनै रूपले हुन्छ भनेर जनताले दुखेसो गरेका हुन् । व्याख्या गर्दा फरक–फरक हुन्छ भन्ने हो तर त्यसो भन्नु हँुदैन ।
कानुनलाई बोधगम्य, सरलीकृत गराउने चुनौती छ । कानुनप्रति सर्वसाधारणको विश्वास दिलाउनुपर्छ । कानुन प्रमुख हो, राजनीति गौण हो । संविधान, कानुनको मर्यादाभित्र राजनीति परिचालन र निर्देशित हुनुपर्छ । यसो भए मात्र मुलुक समृद्ध हुन सक्छ । कानुनको शासन भएको देश मात्र समृद्ध हुन्छ ।
संविधान कानुन संसद् कानुन सचिव